Fa Maninona no Sady Lafo no Mikisaka ny Internety ao Mali Miohatra amin’i Sénégal na Cote d’Ivoire Ohatra? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2015 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, English, Ελληνικά, Français
Afisim-panentanan'ny fikambanana 100megaMali nahazoana alalana avy amin-dry zareo
100Mega Mali dia fandraisana an-tanana iray eo amin'ny sehatry ny teknolojia vaovao ao Mali mitady fanatsarana ny halakin'ny internety amin'ny vidiny takatry ny olona.
Efa maromaro ny nanaraka ny hashtag #Mali100mega ao amin'ny twitter Maliana hatramin'ny niforonany. Tamin'ny voalohany izy nampiasain'ireo mpandraharahan'ny teknolojia, mpikatroka ary blaogera maliana tao amin'ny twitter tamin'ny 27 avrily 2015 ho fitakiana ny « fanatsarana henjana eo amin'ny halaky sy ny vidin'ny internet ao Mali » araka ny nanazavan'i Tidiane Ball , blaogera, sy mpamorona ny start-up malisanté.com sy ny sehatra iasana miaraka Donilab.
Nanomboka tamin'ny alalan'ny dokambarotra hosoka manambara ny fidinan'ny vidin'ny serasera sy ny fitomboan'ny halaky ny fanentanana. Dokambarotra kisangisangy maka tahaka ny ataon'ny orinasan'ny fifandraisandavitra mahazo vahana amin'ny internety ao Mali, nampiasan'ny Orange Mali ny : 2 méga amin'ny vidiny 29.000 F CFA [tokotokony ho 50 dolara] mba ahafahana mitsapa ny fihetsiky ny Maliana mpiserasera (izay tsy voafitaky ny fandrika) nefa ry zareo tany ivelany kosa niarahaba ny fiafaran'ny fahoriana.
Navoaka ny habaka www.100mega.ml ahitana ny fampahafantarana rehetra amin'ny fijaliana iaretan'ny mpiserasera internety ao Mali, ary roa ihany ny orinasam-pivarotana internety ao aminy. Ny fanorotoroana an-tsary dia manome ny sara ampiharin'ny Orange Mali izay mitana ny ampahany be indrindra amin'ny tsena sy ny ampiharin'ny Malitel. Tsy nampiakatra ny halakin'ny serasera ny Orange hatramin'ny 2009 araka ny hita. Manafintohina tokoa ny mahita ny sara atolotry ny Orange ao Mali raha ampitahaina amin'ny ao Sénégal na any Cote d’Ivoire. Manamafy toy izao ao amin'ny sata iray ao amin'ny Facebook i Renaud Gaudin, spesialista amin'ny teknolojia vaovao ao amin'ny Jokkolabs Bamako :
Nous, entrepreneurs dans les domaines des tics et de l'innovation technologique, ne pouvons en aucune manière relever le défi de l'innovation par rapport à Dakar ou Abidjan avec les tarifs et ce ridicule débit de 384 bps que Orange Mali nous donne si chèrement.
Izahay, mpandraharaha sy manampahaizana eo amin'ny sehatry ny teknolojia vaovao, dia tsy afa-miatrika ny fanamby amin'ny fanomezana zava-baovao raha ampitahaina amin'ny any Dakar na any Abidjan amin'ny halafon'ny sara omen'ny Orange Mali nefa ny halakin'ny serasera dia 384 bps mampihomehy io.
Tabilao fampitahana ny saran'ny internety ao amin'ny firenena ao Afrika Andrefana, hita ao amin'ny 100megaMali
Ny Fahefana Maliana mpandrindra ny fifandraisandavitra sy ny paositra [autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes] (AMRTP) izay notarihan'ny minisitry ny toekarena nomerika amin'izao fotoana hatramin'ny 2008, Choguel Kokala Maiga, no voatondro ho tsy nanao na inona na inona fa hisian'ny fiovana amin'ity toe-draharaha ity. Etsy ankilany anefa dia tsy mamaly mihitsy ny kaonty twitter-ny Minisiteran'ny toekarena nomerika sy ny fifandraisana ao Mali, na dia misy imbetsaka aza ny fipaingorana sy fanamarihana ny anarany ao amin'ny twitter.
Nahafahana namondrona ny mpanorina ny Jokkolabs Bamako sy ny mpanorina ny Donilab ary ny tontolom-blaogy maliana iray manontolo ny hashtag #Mali100mega noho izany. Ny antony nanetsika azy ireo hampiasa ny hashtag [diezy] dia ny iampangana ny haratsin'ny internety izay ambany loatra nefa dia lafo dia lafo tokoa ka tsy ahafahan-dry zareo manohy ny asan-dry zareo eo amin'ny sehatry ny teknolojia vaovao.
Nanatontosa lahatsary fohy vitsivitsy ry zareo hanazavana amin'ny mpiserasera ny kinendrin'ny hetsika izay tsy mijanona fotsiny amin'ny fanentanana #Mali100mega na hanazavana fotsiny ny elanelan'ny sara ataon'ny Orange Mali sy ireo orinasan-tserasera hafa ao amin'ny faritra, indrindra fa ny ao Sénégal sy Cote d’Ivoire. Kianin-dry zareo ihany koa ny fikambanana maliana mpandrindra ny teknolojia.
Noho ny fitomboan'ny fahatezeran'ny olona dia nanasa ireo mpitarika ny hetsika ny Orange Mali hivory tamin'ny 7 mey. Saingy tsy nahitam-bokany izany fihaonana izany : navoakan'ny Orange Mali ny fandresen-dahatry ry zareo hanazavana ny maha-ambany ny halakin'ny internet ary nokianiny ny AMRTP ho tsy mba manome onjampeo radio sasantsasany hanalalahana ny zotra nefa tsy nilaza na inona na inona tamin'ny halafon'ny internety indray ry zareo. Renaud Gaudin nanampy hoe:
Ny hanananay serasera tsy voafetra amin'ny halaky azo iafiana sy sarany antonony, ahafahanay manatontosa ny asanay no tanjon'ny 100mega Mali.
Rehefa tsy nahazo rariny ny Jokkolabs sy ny Donilab dia nanambara ny fikatonany. Mitohy ao amin'ny tambajotra sosialy ny tolona. Raha te-hiditra na hanohana ny fanentanana dia ampiasao ny #Mali100mega. Kitro ifaharan'ny mpiserasera nomerika sy ireo mpandraharahan'ny teknolojia vaovao, ireo mpikatroka ary ireo blaogera izay mampianatra sy mivarotra vaovao an-tserasera ny internety.
Tsy ahafahana manao na inona na inona ny internety amin'izao fotoana ao Mali. Ny herimpo sy ny fanaovana sorona ny tenany ihany no ahafahan'ny Maliana sasantsasany manatontosa ny tetikasany.